miui rom update ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ « XMS-MMF
miui rom update ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Xiaomi Device သုံးသူတိုင်းအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေများထဲက တခုကတော့ miui rom update ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပါပဲ...အခြေခံအားဖြင့်တော့ သုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်...1. system update2. recovery update3. fastboot update
1. system update ဆိုတာ updater ကနေ check update now ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ရင် ဒါမှမဟုတ် auto update ပေးတာကို ခေါ်တာပါ.. 0ta လို့ အသိများကြပါတယ်။ တချို့က system update ကို android version မြှင့်ပေးတာလို့ အထင်မှားတတ်ကြလို့ပါ...
2. recovery udpate ဆိုတာကတော့ fully rom ကိုဒေါင်းပီးတော့ recovery mode ကိုဝင်ပီး update လုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်......
3. fastboot update ဆိုတာကတော့ မိမိဖုန်းက အပေါ်က နှစ်နည်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပီး အသုံးပြုရတာပါ...
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို pdf ဖိုင်များနဲ့ တင်ပေးထားတာမို့ ပုံနဲ့ လုပ်နည်းလေး အတွဲမို့ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ....
download links.......http://pc.cd/1TdrtalK (ဖုန်းကနေပဲ တိုက်ရိုက် update လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေပါ)
http://pc.cd/O5WctalK (ဒါကတော့ mi flash tool ပါ Snapdragon device တွေနဲ့ MTK device တွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ်... အထဲက လုပ်ပုံလုပ်နည်းက bootloader lock အလုံးကို စမ်းပြထားတာမို့ bootloader lock မဟုတ်တဲ့အလုံးတွေကတော့ အဆင့် ၃ နဲ့ ၄ ကိုကျော်ပီး လုပ်ဆောင်ရပါမယ်....)
http://pc.cd/3xcrtalK (ဒီနည်းလမ်းကတော့ MTK devices တွေအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်...)
pdf တိုင်းမှာ လိုအပ်မဲ့ အချက်အလက်တွေကို လင့်တွေပေးထားတာမို့ အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်....
အားလုံးအဆင်ပြေပီး device ကို ကိုယ်တိုင်နည်းလမ်းတကျ အသုံးပြုနိုင်ပါစေ.......